शारीरिक सम्बन्धबारे अनुसन्धान: सेक्सले पनि शरीर सुन्दर बनाउँछ ! « Today Khabar
शारीरिक सम्बन्धबारे अनुसन्धान: सेक्सले पनि शरीर सुन्दर बनाउँछ !
प्रकाशित २ पुष २०७४, आईतवार ०८:५५
अनुहारमा रिंकल्स कम हुनका लागि महँगो क्रिमले मात्र भूमिका खेलेको हुँदैन । किनभने शारीरिक सम्पर्कले पनि अनुहारमा भएको रिंकल्स हटाउन मद्दत गरिरहेको हुन सक्छ । शारीरिक सम्पर्कले शरीरमा कोलेजन हर्मोन बढाएर अनुहारलाई इलास्टिसिटी बनाउँछ । जसकारण मानिसले रिंकल्सको समस्याबाट पनि छुटकारा पाउँछ ।नयाँ पत्रिकाबाट